Ulo mmiri na-ala n'iyi na-emegharị ihe nkiri
N'ọnwa Disemba 2019, ndị otu R&D nke Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd na -aga n'ihu na -emepụta ihe ọhụrụ, na -achọ ịkwalite arụmọrụ ngwaahịa na inye ndị ahịa akụrụngwa dị mma na nke dị elu. Anyị ewepụtala ụdị Evaporator ọhụrụ ...
Ụdị ọhụrụ nke Single Screw Press.
N'ọnwa June 2020, na ebumnuche nke ihe ọhụrụ na mmepe na -aga n'ihu, yana mkpa nke ahịa ahụ, Zhejiang Fanxiang Mechanical Equipment Co., Ltd ewepụtala onwe ya n'ụdị ụdị Single Screw Press. Ọ bụ ezie na igwe eji achọ ihe nke ukwuu dị u ...
Okwu a na -elele. Oge: 2021-8-1-2021-8-31 Isi okwu: mmachi mmepụta iji belata ọdọ mmiri nke nkwụghachi ụgwọ akụrụngwa Ntụziaka mbipụta a. Review Nyocha ahịa: ọnụ ahịa rịrị elu nke ukwuu n'ihi mmụba dị mma sitere na mgbochi mgbochi. Analysis Nyocha ọkọnọ: ọkọnọ na -aga n'ihu na nkwekọrịta, yana ngwa ahịa ...